ထိုင်းရိုးရာပုစွန်ချဉ်စပ်ပာင်းရည် ( Tom Yam Goong) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ထိုင်းရိုးရာပုစွန်ချဉ်စပ်ပာင်းရည် ( Tom Yam Goong)
ပါတယ်....။ခုချိန်မှာ..အသင့်သုံး( Ready to use ) တွေကို...ကြိုက်ရာတံဆိပ်
စပါးလင်........................( ၃) ပင် ။ ခပ်ထူထူ / စောင်း လှီးထားပေးရန်
ပဒဲကော........................(၁) တက် .ပါးပါးလှီးထားရန်
ငရုတ်စိမ်းတောင့်နီ............(၂) တောင့် ၊ပါးပါးလှီးထားရန်
ငါးငံပြာရည်.................... (၂) ဇွန်း ( ထမင်းစားဇွန်း)
သကြား..........................( ၁) ဇွန်းခွဲ.။။။။။။။။။။။။။။။
ကောက်ရိုးမှို....................(၅) ခု ။ခပ်ကြီးကြီးလှီးပြီးသန်.စင်ထားရန်
ပုစွန်...............................၀.၅ ကီလို အခွံခွါ..သန်.စင်ထားရန်
သံပုရာရည်......................(၂) ဇွန်း.( ထမင်းစားဇွန်း)
ငရုတ်ခြောက်တောင့်ကြော်....( ၄) တောင့်၊ အလှဆင်ရန်..။
ပထမဆုံး..ကြက်သားပြုတ်ရည်ထဲကိုစပါးလင် ၊ပဒဲကော၊ တုမ်ယမ်းပာင်း
အနှစ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့်နီ ၊ တောရှောက်ခါးရွက် ၊ ကြက်သွန်နီလေးစိတ်
ခွဲတို.နှင့်ဆူပွက်အောင်အပူပေးပါ။ ပြီးရင်..ငါးငံပြာည်၊ သံပုရာရည်၊ ပာင်းခတ်မှုန်.
အရသာအနေနဲ.ကတော့..ချို၊ ချဉ်၊ ငံ၊ စပ် ၊ အီ၊ မွှေးနေတဲ့အရသာပါ...။